“Waa wax laga xishoodo guuldaradii xulka qaranka England” – Sergio Ramos – Gool FM
Kooxaha Real Madrid iyo Manchester City oo iska xaadiriyay wareega afar dhamaadka tartanka Champions League… +SAWIRRO
Baskii xiddigaha kooxda Real Madrid u siday garoonka Anfield oo la weeraray
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Liverpool iyo Real Madrid wareegga Siddeed dhamaadka Champions League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Borussia Dortmund iyo Man City wareega Siddeed dhamaadka Champions League oo la shaaciyey.
“Xitaa haddii uu joogi lahaa Van Dijk, Real Madrid ayaa guuleysan doonta!” – Halyeey kooxda Liverpool ah
Kooxda Chelsea oo halkaan sabab darteed u joojin karta soo qaadashada Sergio Aguero
Tababaraha ay Kooxda Tottenham ku beddelanayso haddii uu tago Macallin Jose Mourinho oo la ogaaday
Ka hor kulanka habeen dambe Kooxda Arsenal ee Europa League, maxaa ka soo kordhay xaaladda dhaawac ee Aubameyang & Odegaard?
“Ma jirto sabab ay ku baxaan Neymar iyo Mbappe” – Madaxweynaha Kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi
Manchester United oo mar kale baacsaneysa xiddig muhiim u ah Real Madrid
“Waa wax laga xishoodo guuldaradii xulka qaranka England” – Sergio Ramos
Dajiye October 16, 2018
(Spain) 16 Okt 2018. Kabtanka xulka qaranka Spain iyo kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa ka hadlay sida uu kaga xun yahay guuldaradii 3-2 ahayd ee kaga soo gaartay dhigooda England kulankii UEFA Nations League.
“Quruxda kubada cagta waa inay nasiisaa fursad aan wax walba ku badali karno, waxaan iska ilaawnay wixii dhacay qeybtii hore, laakiin waxa ugu fiican ayaa ah jawaab celintii aan sameenay qeybta labaad ee ciyaarta”.
“Waa wax laga xishoodo in lasoo gaba gabeeyo rikoorkeena fiicnaa ee guuldaro la’aanta ee gudaha garoomadeena dalka Spain, ma aysan fiicneen in xaalada ay sidan u dhacdo, lakiin haatan waxaan heysanaa kulan kale, waa inaan sameynaa wax walba ee awoodeenu gaarsiisan tahay”.
Si kastaba xulka qaranka England ayaa soo gabagabeeyay silsilada guuldaro la’aanta ahayd xulka qaranka Spain ee 38 kulan ay kusoo ciyaareen gudaha dalka Spain, taasoo soo jireen ahayd mudo 15 sano ah.
“Xulka qaranka England wuxuu heystaa awood heersaro ah, waxay heystaan xidigo aad qatar u ah, waxay ahayd inaan iska iloowno waxa dhacay qeybta hore ee ciyaarta, isla markaana aan la wareegno gacan ku heynta kulanka qeybtii labaad”.
Barcelona oo dooneysa inay ku ciriiriso kooxda Man United saxiixa mid ka mid ah xidigaha ku sugan horyaalka Premier League
Waa sidee xaalada Maxamed Saalax iyo Virgil van Dijk???